Nepal Auto | घाममा कार राख्दा ६० मिनेटमा कुन पार्ट कति तात्तिन्छ ? यस्तो छ रिपोर्ट
घाममा कार राख्दा ६० मिनेटमा कुन पार्ट कति तात्तिन्छ ? यस्तो छ रिपोर्ट 16 Jestha, 2075
यदि कारलाई गर्मीमा तातो घाममा राख्ने हो भने एक घण्टाकै अवधिमा यसको क्याबिनको तापक्रम ४६ डिग्री सेल्सियस पुग्ने तथ्य पत्ता लागेको छ । यसका कारण कारमा बस्न र चलाउन पनि असहज हुन्छ । त्यति मात्र होइन, यसका कारण कारमा खराबी आउने खतरा पनि बढ्छ ।
एरिजोना स्टेट युनिभर्सिटीमा रिसर्च प्रोफेसर न्यान्सी सेलोवरको नेतृत्वमा गरिएको अध्ययनमा सो तथ्य पत्ता लागेको हो । सो अवस्थामा कारको ड्यासबोर्डको तापक्रम ६९ डिग्री, स्टेयरिङ ह्विलको तापक्रम ५२ डिग्री र सिटको तापक्रम ५० डिग्री सेल्सियस हुन्छ ।
त्यसैगरी क्यालिफोर्निया सान डियागो युनिभर्सिटी र एरिजोना स्टेट युनिभर्सिटीका रिसर्चरले गरेको अध्ययन अनुसार सो समयमा ड्यासबोर्डको तापक्रम ७३ डिग्री सम्म पुग्छ । जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनमा विभिन्न प्रकारका कारको तापक्रम तुलना गरिएको छ ।
अध्ययनमा गर्मी समयमा कारलाई छायाँमा राख्दा कति तापक्रम हुन्छ भन्ने वारेमा पनि बताइएको छ । सो अनुसार छायाँमा कार राख्दा एक घण्टामा कारको भित्रको तापक्रम ३७ डिग्री सेल्सियसको नजिक पुग्छ ।
त्यसैगरी ड्यासबोर्डमा ४७ डिग्री, स्टेयरिङ ह्विलमा ४१ डिग्री र सिटमा ४० डिग्री सेल्सियस तापक्रम पुग्छ ।
बुद्ध एयरको एटिआर ७२–५०० जहाज काठमाण्डौं आइपुग्यो
काठमाडौ – बुद्ध एयरको एटिआर ७२-५०० जहाज काठमाण्डौं आइपुगेको छ । फ्रा...
आजकै दिन काठमाडौँबाट यसरी भएको थियो विमान अपहरण,१८ वर्ष पहिला
अठार वर्ष अघि, २४ डिसेम्बरको साँझ, शुक्रबारको दिन र घडीमा चार बज्न लागेको थियो ।...
काठमाडौं – भक्तपुरको सानोठिमीस्थित एमएडब्लु अपरेटर तालिम केन्द्रमा धेरै जन...